Iihotele: Ingeniso yokuhamba ishishini iyehla kwi-59 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » Iihotele: Ingeniso yokuhamba ishishini iyehla kwi-59 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuhamba ngezorhwebo kuye kwacotha ukubuya okoko kwaqala ubhubhane. Ukuhamba kweshishini kubandakanya indibaniselwano, iqela, urhulumente, kunye nezinye iindidi zorhwebo. Ingeniso yokuhamba kweshishini ayilindelwanga ukuba ifikelele kumanqanaba angaphambi kobhubhane kude kube ngu-2024.
Umzi mveliso wehotele uqikelele ukuphela nge-2021 ezantsi ngaphezulu kwe-59 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yokuhamba kweshishini.
Umzi mveliso wehotele ulahlekelwe phantse yi- $ 49 yezigidigidi kwingeniso yohambo lweshishini ngo-2020.
Ukuhamba ngezorhwebo ngowona mthombo mkhulu wengeniso.
Umzi mveliso wehotele uqikelelwa ukuba uphele ngo-2021 ezantsi ngaphezulu kwe- $ 59 yezigidigidi kwingeniso yohambo lweshishini xa kuthelekiswa ne-2019, ngokwengxelo entsha ekhutshwe namhlanje. Oko kuza emva kokulahleka phantse kwe- $ 49 yezigidigidi kwingeniso yokuhamba kweshishini ngo-2020.
Ukuhamba ngezorhwebo ngowona mthombo mkhulu wengeniso yehotele kwaye kuye kwacotha ukubuya okoko kwaqala ubhubhane. Ukuhamba kweshishini kubandakanya indibaniselwano, iqela, urhulumente, kunye nezinye iindidi zorhwebo. Ingeniso yokuhamba kweshishini ayilindelwanga ukuba ifikelele kumanqanaba angaphambi kobhubhane kude kube ngu-2024.
Uhlalutyo olutsha luza kwizithende zophando lwe-AHLA lwamva nje, olufumanise ukuba uninzi lwabahambi kwezorhwebo bayarhoxisa, banciphise, kwaye bayamisa ezinye iihambo phakathi kokunyuka kwamatyala e-COVID-19.
Ukungabikho kohambo lweshishini kunye neminyhadala kunefuthe elikhulu kwingqesho, kwaye ikwagxininisa isidingo sombuso esijolise kuwo, njengeSave Hotel Jobs Act.
Iihotele kulindeleke ukuba ziphele ngo-2021 ziyekise malunga nama-500,000 emisebenzi xa kuthelekiswa nonyaka ka-2019. Kubo bonke abantu abali-10 abaqeshwe ngqo kwipropathi yehotele, iihotele zixhasa imisebenzi eyongezelelekileyo engama-26 ekuhlaleni, kwiindawo zokutyela nakwiivenkile ukuya kwiinkampani ezibonelela ngeehotele- oko kuthetha ukuba zongezwe phantse kwisigidi esi-1.3. imisebenzi exhaswa ziihotele nayo isemngciphekweni.
"Ngelixa amanye amashishini eqale ukunyuka kulo bhubhane, le ngxelo isikhumbuza ukuba iihotele kunye nabasebenzi basehotele basasokola," utshilo uChip Rogers, umongameli kunye neCEO ye Umbutho weAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA).
“Uhambo loshishino lubalulekile kwishishini lethu, ingakumbi ekwindla nasebusika kwiinyanga xa uhambo lokuzonwabisa luqala ukwehla. Ukuqhubeka kwenkxalabo ye-COVID-19 phakathi kwabahambi kuya kuyandisa le mingeni. Yiyo loo nto ilixesha lokuba iCongress iphumelele i-bipartisan Gcina uMthetho weMisebenzi yehotele ukunceda abasebenzi basehotele kunye noosomashishini abancinci basinde kule ngxaki. ”
Ngaphandle kwezona ndawo zibethekileyo, iihotele kuphela kwenxalenye yeshishini lokwamkela iindwendwe kunye nelokuzonwabisa okwangoku ukufumana uncedo ngokuthe ngqo. Iihotele kunye nabasebenzi bazo babonakalise ukomelela okungaqhelekanga xa bejamelene nemiceli mngeni yezoqoqosho engazange ibonwe ngaphambili, kwaye eli shishini lifuna inkxaso kwiCongress ukuze liphile ngokupheleleyo.